Alatsinainy, 16 Jona, 2014 Talata, Febroary 26, 2019 Douglas Karr
Halako i GoDaddy. Tena nanao izany aho. Tsy nino aho fa ny marika iray dia afaka mandany vola an-tapitrisany dolara amin'ny fametahana cleavage ary manohy manangana orinasa be dia be. Izany dia tehamaina teo amin'ireo mpivarotra izay niasa mafy hitazomana ny marik'izy ireo hifanaraka, mangarahara, matihanina ary manampy ny mpihaino azy ireo. Io no lalan-kaleha mora… ary toa mandeha izany. Nanoro hevitra ny mpanjifako rehetra aho hampiasa serivisy hafa ary hijanona lavitra. Rehefa mandeha ny fotoana